अग्निविरूद्ध कांग्रेसले किन दिएन उम्मेदवारी? – Online National Network
८ माघ २०७६, बुधबार ०२:४५
काठमाडौं, ८ माघ – सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले स्थायी समिति सदस्यसमेत रहेका सांसद अग्नि सापकोटालाई सभामुख उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेपछि कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ट्वीटरमा लेखे- राजनीतिमा अनेक पात्र र प्रवृत्ति हुन्छन्।
कुन पदमा कस्तो प्रवृत्ति? छनौट उचित भएन भने त्यो पदको गरिमा त धरापमा पर्छ नै। राजनीतिप्रतिनै थप वितृष्णा बढ्छ। श्री पशुपतिनाथले बहुमतधारी नेकपालाई सद्बुद्धि प्रदान गरून्।
सापकोटाविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। सापकोटा काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा संलग्न रहेको भन्दै परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले माघ २२ मा सुनुवाइ गर्दैछ। प्रवक्ता शर्माले त्यही कुरालाई संकेत गर्दै सापकोटा सभामुख हुन नहुने संकेत गरेका थिए।
सोमबारसम्म पनि कांग्रेसले हारिने भए पनि सभामुखमा उम्मेदवारी दिने मनस्थिति बनाएको थियो। सचेतक पुष्पा भुषाललाई उम्मेदवार बनाउने तयारी भएको थियो। सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा पनि सापकोटाको मुद्दाबारे टीकाटिप्पणी जारी थिए।
सापकोटालाई सर्वसम्मत बनाउन प्रचण्डले सक्रियता बढाए। सोमबार बेलुका प्रचण्डले देउवालाई टेलिफोन गरे। प्रचण्ड र देउवाबीच हिजोआज नियमितजसो कुराकानी गर्छन्। सोमबार साँझ प्रचण्डले भने- अग्निप्रसाद सापकोटालाई सभामुखमा समर्थन गरिदिनुपर्‍यो।
मंगलबार बिहान प्रचण्डले कांग्रेस बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई आफ्नै निवास खुमलटारमा बोलाए। प्रचण्ड र पौडेलबीच खुमलटारमा कुराकानी भइरहेका बेला सिंहदरबारमा कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बसिरहेको थियो। उक्त बैठक सभामुखमा पार्टीबाट उम्मेदवारी दिने/नदिने विषयमा छलफल भइरहेको थियो।
पौडेलको सचिवालयले प्रचण्ड-पौडेल भेटवार्ता भएको बताए पनि भेटमा के कुराकानी भएको भन्ने सार्वजनिक गरेको छैन। पौडेलसँग प्रचण्डले आफूहरू कांग्रेसलाई उपसभामुख छाड्न सकरात्मक रहेको बताएको स्रोतको दाबी छ। पौडेलका सहयोगी चिरञ्जिवी अधिकारीले प्रचण्ड-पौडेलबीच अनौपचारिक कुराकानी मात्रै भएको बताए।
‘अध्यक्ष प्रचण्डले बरिष्ठ नेतासँग पहिलेदेखि नै भेट्न खोजिरहनुभएको थियो। उहाँ (पौडेल) उपचारका लागि हालै नयाँ दिल्ली जानुभएकोले भेटघाटको समय मिलिरहेको थिएन। आज समय मिलाएर कुराकानी भएको हो। यो औपचारिक कुराकानी थिएन,’ अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने। पौडेलसँग प्रचण्डको कुराकानी भएको केहीबेरमा सकिएको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले सभामुखमा उम्मेदवारी नदिने निर्णय गर्‍यो।
‘संसदीय दलको कार्यसमितिले सभामुखमा उम्मेदवार नदिने निर्णय गरेको छ,’ उनले भने, ‘सभामुखको पद निष्पक्ष, तटस्थ, स्वीकार्य र साझा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ।’ सभामुख निर्वाचित भइसकेपछि पार्टी सदस्यता पनि त्यागेको हुनुपर्छ। सभामुखले प्रतिपक्षलाई झन् बढी महत्व दिनुपर्ने भएकोले अहिले चिढ्याउन नखोजेको संकेत खाँणले गरेका छन्।